Fitotoana kodiarana sy fanapahana kapila orinasa, mpamatsy - China fikosoham-bary ary fanapahana kapila mpanamboatra
Tifitra vy ambany karatra
Tifitra vy notapahana vy
Tifitra vy notapahana vy vy
Kodiarana fitotoana diamondra TAA dia ampiasaina amin'ny fanapahana sy fikolokoloana vy fantsom-pandehanana, vy vy fanariana, vy vy, extrudate vy, beton nohamafisina, vera fibre ary fitaovana marefo. Ny indostria mihatra indrindra dia ny famaritana, ny milina, ny fanamboarana sambo ary ny fanamboarana, ny fanamboarana, ny fanodinana ny fitambarana, ny fanapahana ny fiara, ny famonjena vonjy maika, sns.
Kodiarana fitotoana diamondra TAAdia ampiasaina amin'ny fanapahana sy fikolokoloana vy fantsom-pandehanana, vy vy fanariana, vy vy, extrudate vy, beton nohamafisina, vera fibre ary fitaovana marefo. Ny indostria mihatra indrindra dia ny famaritana, ny milina, ny fanamboarana sambo ary ny fanamboarana, ny fanamboarana, ny fanodinana ny fitambarana, ny fanapahana ny fiara, ny famonjena vonjy maika, sns.
Kapila fanapahana diamondra TAA dia ampiasaina amin'ny fanapahana sy fikolokoloana vy fantsom-pandehanana, vy vy fanariana, vy vy, extrudate vy, beton nohamafisina, vera fibre ary fitaovana marefo. Ny indostria mihatra indrindra dia ny famaritana, ny milina, ny fanamboarana sambo ary ny fanamboarana, ny fanamboarana, ny fanodinana ny fitambarana, ny fanapahana ny fiara, ny famonjena vonjy maika, sns.
Kapila fanapahana diamondra TAAdia ampiasaina amin'ny fanapahana sy fikolokoloana vy fantsom-pandehanana, vy vy fanariana, vy vy, extrudate vy, beton nohamafisina, vera fibre ary fitaovana marefo. Ny indostria mihatra indrindra dia ny famaritana, ny milina, ny fanamboarana sambo ary ny fanamboarana, ny fanamboarana, ny fanodinana ny fitambarana, ny fanapahana ny fiara, ny famonjena vonjy maika, sns.